၈ လအတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ပြန်ပို့ရသည့် မြန်မာမွတ်စလင် ၁ သောင်းကျော်ရှိဟုဆို | ဧရာဝတီ
ငြိမ်းချမ်း| February 18, 2013 | Hits:13,254
4 | | မောင်တောမြို့တဘက်ကမ်းရှိ တာ့ခ်နာဖ်ဆိပ်ကမ်း (ဓာတ်ပုံ – Shahnoor Habib Munmun)
မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခများ စတင်ခဲ့ချိန်မှ ပြီးခဲ့သည့်လအထိ မြန်မာဘက်မှ တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာ သည့် မြန်မာမွတ်စလင်များကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ဖမ်းဆီးပြန်ပို့သည့် လူဦးရေ ၁ သောင်းကျော်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ နယ်ခြားစောင့်တပ် အရာရှိ၏ အဆိုအရ သိရသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်၊ ဇူလိုင်နှင့် နိုဝင်ဘာလများမှ စ၍ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း မောင်တောမြို့နယ် နယ်စပ်မှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ အတွင်းသို့ တရားမဝင် ခိုးဝင်လာသူ များကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများက ဖမ်းဆီးကာ တက္ကနာ အခြေစိုက် အမှတ် ၄၂ နှင့် ကော့စ်ဘာဇာ အခြေစိုက် အမှတ် ၁၇ BGB တပ်ရင်းများက တာဝန်ယူပြီး နယ်စပ်တွင် ၎င်းတို့၏ နေရပ်နိုင်ငံဆီ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးနေခြင်း ဖြစ်ကာ လူ ၁ သောင်းဝန်းကျင်ခန့် ရှိပြီဟု နယ်ခြားစောင့်တပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က ပြောကြားကြောင်း ကော့စ်ဘာဇာမြို့ထုတ် သတင်းများတွင် ယခုလ ၁၃ ရက်နေ့က ဖော်ပြသည်။
နယ်စပ်တလျှောက်မှ တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာသည့် မြန်မာမွတ်စလင် များကို နေ့စဉ် ဖမ်းဆီးပြန်ပို့နေခြင်း ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် ဝင်လာမှုများလည်း ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း နယ်စပ်အနီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်ခြမ်းမှ ခေါင်းတုန်း ကျေးရွာသား တဦးက ဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ ဘက်မှာကတော့ ကော့စ်ဘာဇာ ခရိုင်ထဲက နေရာတိုင်းမှာ ဖမ်းလို့ရတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေကို BGB ကလည်း နေ့တိုင်း သွင်းနေတာပဲ၊ ခိုးဝင်လာတဲ့ လူတွေကလည်း ဝင်နေကြတာပဲ” ဟု ခေါင်တုံးရွာသားက ပြောသည်။
ယင်းသို့ ဖမ်းဆီးပြီး ပြန်လည် ပို့ဆောင်မှုများ ရှိနေသော်လည်း ကော့စ်ဘာဇာ ခရိုင်အတွင်းမှ ကော့စ်ဘာဇာ၊ ဦးကီယာ၊ ရာမူး (ပန်းဝါ)၊ ဆော်ကော်ဒီယာ၊ မဟားဇိုးကျွန်း၊ တက္ကနာ၊ ညစ်လ၊ ရှင်မဖြူနှင့် ဘန်တရို ခရိုင်အတွင်း မြို့နယ်တချို့တွင် မြန်မာမွတ်စလင်များ ယခင်ကထက် ပိုမိုတိုးပွားလာနေပြီး ပင်လယ်အပမ်းဖြေ စခန်းတခုဖြစ်သည့် ကော့စ်ဘာဇာမြို့ ဟိန်းစရီ ရွာအနီးတွင်လည်း မြန်မာမွတ်စလင်များ ပိုမိုများလာကြောင်း ဟိန်းစရီရွာမှ ရွာသားတဦးက ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ ရွာဘက်မှာ မြန်မာဘက်ကလူတွေ အခြေချလာတာ ပိုများလာတယ်။ ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ ရသလို တဲထိုးပြီး နေလာတာတွေ ပိုတွေ့လာနေရတယ်” ဟု ဟိန်းစရီရွာသားက ဆိုသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများကို ဖမ်းဆီး ပြန်ပို့နေသော်လည်း ထပ်မံဝင်ရောက်မှု နည်းပါးသွားခြင်း မရှိသကဲ့သို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပိုမိုတိုးပွားနေခြင်းမှာ ဖမ်းဆီးရမိသူများကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရ အနေဖြင့် မြန်မာအစိုးရထံ တရားဝင် အပ်နှံခြင်းမရှိသည့် အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း တက္ကနာမြို့မှ ထောက်လှမ်းရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် တဦးက ထောက်ပြပြောဆိုသည်။
“ဖမ်းတယ်၊ နယ်စပ်က ပြန်ပို့တယ်။ ဒီနေရာက ပို့တယ်ဆိုရင် ဟိုနေရာက နေပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံထဲကို တနည်းမဟုတ် တနည်းနဲ့ ပြန်ဝင်တာပဲ။ ဒီတော့ ဘာမှမထူးဘူး” ဟု ရှင်းပြသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံထဲသို့ ၀င်ရောက်လာသည့် မြန်မာမွတ်စလင်များ အနေဖြင့် ရိုသားစွာ လုပ်ကိုင် စားသောက်သူ နည်းပါးပြီး ဓားပြတိုက်၊ လုယက်၊ ပြည့်တန်ဆာ အလုပ်များကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့ ပြစ်မှု ကျူးလွန်သည့် အတွက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားများနှင့် မကြာခဏ ပြဿနာဖြစ်ပွားလေ့ရှိကြောင်း ယင်းထောက်လှမ်းရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်က ဆက်ပြော သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံတွင် အကျဉ်းကျပြီး လွတ်မြောက်လာသူများ၊ ဒုက္ခသည် စခန်းများမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လိုသော ဒုက္ခသည်များကို မြန်မာ အစိုးရအနေဖြင့် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံသား မှန်ကန်ပါက ပြန်လည် လက်ခံကြောင်း၊ ပြန်လည် လက်ခံရေး စခန်းကို မြန်မာ နယ်ခြားစောင့်တပ်က တာဝန်ယူကာ မောင်တောမြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ အစိုးရအနေဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံအတွင်း ဖမ်းဆီးခံရသူများကို လက်မခံခြင်း မဟုတ်ကြောင်း၊ သို့သော် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရက အစီအစဉ်တကျမဟုတ်ဘဲ ပို့လာခြင်းကိုသာ လက်မခံနိုင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အမည်မဖော်လိုသည့်ြုမန်မာ နစက တပ်ကြပ်ကြီးတဦးက ပြောသည်။
“သူတို့ ပြန်ပို့သလို အခုဖမ်းပြီး အခုပြန်လက်ခံပါ ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးကို ကျနော်တို့ဘက်က လက်မခံဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံသား ဟုတ် မဟုတ်ဆိုတာကို စစ်ဆေးပြီး မှန်တယ်ဆိုရင် ယူတယ်။ အခုက သူတို့က ဖမ်းချင်တဲ့နေရာက ဖမ်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါ ဆိုပြီး လာပေးလို့ လက်မခံတာဖြစ်တယ်” ဟု ယင်း တပ်ကြပ်ကြီးက ဆိုသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံအတွင်း မြန်မာမွတ်စလင်များ ပိုမိုတိုးပွားလာနေသော အဓိက နေရာတခုမှာ ကော့စ်ဘာဇာခရိုင်၊ ဦးကီယာမြို့နယ်၊ ကူတူပါလန် ကျေးရွာအနီးရှိ UNHCR က ဒုက္ခသည် အဖြစ် အသိအမှတ် မပြုဘဲ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရက နေထိုင်ခွင့် တခုသာ ခွင့်ပြုထားသော ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင်က လူ ၇ သောင်းကျော် ရှိခဲ့သော်လည်း အခုအခါ လူဦးရေ ၁ သိန်းကျော် ရှိလာနေကြောင်း ဒုက္ခသည်များ၏ အဆိုအရ သိရသည်။
“လူတွေကတော့ တိုးလာနေတာပဲ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံထဲက နေရာအနှံ့အပြားမှာ နေတဲ့ လူတွေလည်း ပါသလို မြန်မာ နိုင်ငံဘက်က အခုမှ ပြောင်းလာကြသူတွေလည်း ရှိကြတယ်။ ဒီစခန်းမှာက ဦးစီးအဖွဲ့အစည်းလည်း မရှိတော့ လူဦးရေ ဘယ်လောက် တိုးတယ်။ ဘယ်က လူတွေ ဆိုတာ သေသေချာချာ ပြောလို့မရဘူး” ဟု ဒုက္ခသည် တဦးဖြစ်သည့် နိုဒူလ် မာမွတ်က ပြောသည်။
အလားတူ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ မြန်မာ – ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်မှတဆင့် ဝင်ရောက်လာသည့် မြန်မာမွတ်စလင် ၄ ထောင်ကျော်ခန့် ရှိကြောင်း၊ ထိုသူတို့ကို ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပို့ပေးသည့် လူကုန်ကူးသည်ဟု သံသယရှိသူ ထိုင်းစစ်တပ် အရာရှိ ၂ ဦးအား ထိုင်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့က စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သတင်းများ၏ အဆိုအရ သိရသည်။
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment hlaingoo February 18, 2013 - 7:47 pm	What do you mean “မြန်မာ မွတ်စလင်” .
Reply	Myo Nyunt February 18, 2013 - 11:22 pm	နစကက အရင်လိုလဘ်စားပြီး လက်မခံပါနဲ့ နယ်စပ်
လုံခြုံရေးကို မနိုင်ရင် ရခိုင်တပ်ကို လွဲလိုက်ပါ
Reply	Swe htwe February 18, 2013 - 11:43 pm	They are not our citizens. They are returning to their original country,Banglandesh.
Reply	MST February 20, 2013 - 2:25 pm	ဘင်္ဂါလီဆုိုတဲ့သူတွေကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက မြန်မာဆုိုပြီးပြန်ပုို့နေတာကို မြန်မာအစိုးရကလည်း ဘာမှမပြောနုိုင်တော့ သူတုို့တွေက ဘင်္ဂါလီမှ ဟုတ်ရဲ့လား။ ဟုတ်တယ်ဆုိုရင် မြန်မာအစိုးရကရော ဘာဖြစ်လုို့ လက်မခံနုိုင်ဘူးလုို့ မပြောနုိုင်ရတာလဲ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက သူ့နုိုင်ငံသားဆုိုရင်ရော မြန်မာဆုိုပြီး ပုို့မလား။ အင်း… စဉ်းစားစရာတွေတော့ အပြည့်ပဲ။